China Sheet simbi vagadziri uye vanotengesa | P&Q
P & Q haina jira simbi kana CNC fekitori, asi inogona zvakare kupa iyo simbi simbi zvikamu zvinoenderana nevatengi zvinodiwa. Diki kune yakakura saizi, yakave yakashandiswa zvakanyanya mukuvhenekesa uye fenicha yemumugwagwa, nezvimwe zvinoshandiswa.
Kununura Mari-Zvinoshanda Solutions
Kondirakiti yekugadzira sevhisi inogona kukurerutsira padambudziko rekutarisa nekusimbisa vanotengesa - kunyanya vekunze vanotengesa.
Makambani ekugadzira zvibvumirano ane ruzivo rwekune dzimwe nyika anogona kukurumidza kuona mutengesi anogona kunyatso kusangana nezvido zvako. Ivo vanoziva makambani ane kugona kugadzira zvikamu zvako, vakashanyira uye vakaongorora zvivakwa zvekugadzira, uye vanoziva ndevapi vatengesi vane akanakisa rekodhi yemhando uye pane-nguva yekushandisa uye yekugadzira.
Simba reP & Q rinouya kubva mukusiyanisa zvakasiyana maindasitiri anoshandirwa, hwaro hwevatengi, nzvimbo yekutsika, zano rekutsvaga, uye kusvika kwezvinhu. P&Q inogona kudzikisa mutengo wako, kudzikisa zvinyorwa zvako, uye kucheka kutungamira nguva.
Iyo P & Q yekupa manejimendi manejimendi maitiro anoshandisa ekumisikidza vamiririri uye mhando mainjiniya. Isu tinowana vekugadzira vatengesi zvichibva pahunhu, nguva yekuendesa, uye mutengo. Maitiro edu evatengesi anosanganisira ISO chitupa, epamberi ekugadzira zvivakwa, kugona kwakaratidza kugona kwekuvimbiswa, zviwanikwa zveinjiniya, QA, uye ne-nguva yekugadzira. Vese vatengesi veP & Q vanofanirwa kupfuudza edu akaomesesa odhita yekugona kugona uye kuvimbiswa kwemhando yepamusoro. Ivo vanodawo kuratidza mhando uye kuendesa kugona kugona kuzadzikisa zvinodikanwa zvevatengi vedu.
Zvakanakira Cnc machine
Dzikisa mari dzevashandi uye zvekushandisa
Maumbirwo akaomarara anowanikwa zviri nyore
Zvishandiso zvinoshandiswa nokuti CNC machine
Pashure: Jekiseni repurasitiki
Zvadaro: Gungano rezvakapedzwa zvigadzirwa uye semi-apedza zvigadzirwa
Gungano rezvakapedzwa zvigadzirwa uye semi-apera ...